Guddiga TSC oo ka hadlay macalimiintii lagu dilay Mandera – The Voice of Northeastern Kenya
Guddiga TSC oo ka hadlay macalimiintii lagu dilay Mandera
Guddiga adeegga macalimiinta ee TSC ayaa sheegay in laba barayaal ah oo maalmo ka hor lagu dilay degaanka hoose ee Carabiya ee ismaamulka Mandhera aysan ka mid ahayn barayaasha u diiwangashan.
Agaasimaha TSC ee maamul goboleedkaasi Axmed Jimcaale ayaa carrabka ku dhuftay in macalimiinta la dilay uu shaqaleysiiyay guddiga maamulka ee xaruntaasi waxbarasho.
Waxaa uu intaasi ku daray inay ka qoomamoonayaan falkii dhacay ee saameeyay dugsiga sare ee wiilasha ee Carabiya.
Mr .Jimcaale ayaa carrabka ku adkeeyay in ka guddi ahaan ay macalimiinta ka soo jeeda degaanada kale ee dalka ay ka soo wareejiyeen dugsiyada ku yaalo meelaha ay horay uga dhaceen weerarada argagixiso.
Amarkaasi ayuu sheegay inuu ka yimid xarunta dhexe ee TSC ee magaaladatani Nairobi ayna u hoggaansameen bishii labaad ee sannadkan.
Agaasimaha TSC ee ismaamulka Mandhera ayaa intaasi ku daray in macalimiinta dugsiyadaasi laga soo wareejiyay ay gaarayaan 108 wax ka dhigayay dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare.
Dhanka kale guddiga adeegga macalimiinta ee TSC ayaa madaxda ururka qaran ee barayaasha dalka ee KNUT ku casuumay shir la qorsheynayo inuu dhaco toddobaadka soo socdo.
Kulankan ayaa noqonaya wareeggii labaad ee wada hadalada la doonayo in xal loogu helo arrimo dhowr ah oo aanan weli lagu heshiinin.
Madaxa fulinta ee TSC Nancy Macharia ayaa sheegtay in labada dhinac ay shir kale yeelanayaan 19-ka bishan tobnaad.
Kulanka ayaa lagu qabanaya magaaladatani Nairobi wuxuuna ku soo beegmaya maalmo un kadib markii magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru uu ka dhacay mid kale oo aanan laga soo saarin qadobo la isku afgartay.
Arrinta muranka dhalisay ayaa ahayd in guddiga adeegga macalimiinta ee TSC uu diiday inuu ka laabto go’aan 85 maamulayaal ah uu uga wareejiyay xarumihii ay ka howlgalayeen.
Madaxda ururada macalimiinta dalka ayaa dalbanaya in TSC ay soo afjarto barnaamijka barayaasha iyo maamulayaasha loogu wareejinayo dugsiyo kale oo ka baxsan degaanada ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan maadaama ay ku doodayaan in tallabadasi ay keentay saameyn dhanka qoyska ah.
Sido kale ururka qaran ee macalimiinta ee KNUT ayaan la hubin inuu ka dhabeyn doono hanjabaad ahayd in laba toddobaad kadib ay xubnaha ka tirsan shaqa joojin ku dhaqaaqayaan.
Xoghayaha guud ee KNUT ahna xildhibaan baarlamaanka si magacaabid ah ku galay Mr. Wilson Sossion ayaa horay u sheegay in 17-ka bishan macalimiinta aysan iska xaadirin doonin goobahooda shaqo hadii intaasi ka hor aysan jirin wax ay ku qancaan oo loo soo bandhigo.
← Tirada dadka ku dhintay dhul go’o ka dhacay Ugandha oo korortay
Qaramada midoobay oo cambaareysay Sacuudi Carabiya →